သို့ / ဥက္ကဌဆရာတော် ဘုရားကြီး နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃမဟာနာယကအဖွဲ့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးခင်ဗျား။ – MOE THAUK
#NO 1 Media in Myanmar
သို့ / ဥက္ကဌဆရာတော် ဘုရားကြီး နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃမဟာနာယကအဖွဲ့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးခင်ဗျား။
Author Mickey Minnie
(၂)ထို့ကြောင့် နယ်သူနယ်သားရဟန်းရှင်လူပြည်သူအများတို့ ဝိပသနာတရားများကိုအဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ အားထုတ်နိုင်ကြရေးအတွက် “ဖားအောက်တောရဝိပသနာကမ္မဌာန်းရိပ်သာခွဲတစ်ခု”တည်ထောင်နိုင်ရန်အလို့ငှာ၊၆ မိမိတို့ပိုင်မြေယာများအား ဖားအောက်တောရတရားရိပ်သာများ၏ ပဓာနနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီး “အဂ္ဂမဟာကမ္မဌာနာစရိယ၊ဒေါက်တာ၊ ဘဒ္ဒန္တအာစိဏ္ဏထံသို့” ၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလကပင်၊ နယ်မြေခံသံဃာများ၊ကျေးရွာအုပ်စုသံဃာများနှင့်အများပြည်သူတို့၏ ရှေ့မှောက်တွင်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
(၃)ထိုမြေပေါ်တွင်”ဝိပသနာကမ္မဌာန်းရိပ်သာတစ်ခုတည်ထောင်ခွင့်ပြုတော်မူပါရန် “ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ မြေနှင့်သာသနိကအဆောက်အဦးအလှူရှင်ကိုယ်စားပြုသူများ”တို့မှ နယ်မြေခံသံဃာများနှင့်ကျေးရွာသံဃာများသို့ ၂၀၁၂ခုနှောင်းပိုင်းမှ သည်ယခု အချိန်အထိ အကြိမ်များစွာလျောက်ထားတောင်းပန်လာခဲ့ကြသည်မှာ (၅)နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော်လဲ၊မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲခွင့်ပြုချက်ပေးရန်ငြင်းဆန်နေကြပါသည်အရှင်ဘုရား။
(၄)၂၀၁၇ခုဇွန်လနှင့်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာပင်ကျားနေအိုင့်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဦးအာလောကနှင့်ကျားနေအိုင့်ရွာရှားတောကျောင်းဆရာတော်ဦးစက္ကိန္ဒတို့ထံသို့(၁၅)ကြိမ်တိတိသွားရောက်လျောက်ထားတောင်းပန်ခဲ့ကြရာ၌ ၀၂ – ၀၇ – ၂၀၁၇နေ့တွင်ထိုဆရာတော်(၂)ပါးမှအောက်ပါအတိုင်းပြန်ကြားခဲ့ပါသည်အရှင်သူမြတ်ဘုရား။
**တရားရိပ်သာတွင် ရဟန်း၊ သာမနေ၊ သီလရှင်များအမြဲနေထိုင်သီတင်းသုံးခွင့်မပြုနိုင်။
**တရားရိပ်သာဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုရေး၊ ဘယ်ဆရာတော်ကြီး၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကြီး၊ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလာ၍ပြောသည်ဖြစ်စေသူတို့၏သဘောထားရပ်တည်ချက်မပြောင်းနိုင်-ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်အရှင်ဘုရား။
—ဆွမ်းခံရွာဒကာ ဒကာမတို့၏အပေါ်၌ရဟန်းဝတ္တရားလဲမကြေပွန်သည့် ထိုရဟန်းများအားတာဝန်ရှိသံဃာနှင့်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းများကိုယ်တိုင်ကျေးရွာသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍သာသနာတော်သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်အစုံဦးတိုက်၍ ရိုသေလေးမြန်စွာ လျှောက်ထားတောင်းပန်အပ်ပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးဘုရာယ။
Viber No 09972760169
Facebook username ” Khin Maung Latt ”
(ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၊ သာသနာ၊ ရောင်ဝါနေသို့လင်းစေသောဝ်)
(1)ဤနယ်မြေတွင်စစ်မှန်သော”သိက္ခာ(၃)ပါး၊ဝိပသနာတရား” ထွန်းကားပြန့်ပွားလာမည်ကိုမလိုလားကြသော “သာသနာတော်ကိုမှီခိုစားသောက်နေကြသည့်နယ်မြေခံ- လုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်အချို့”၏ပိတ်ပင်တားဆီးနှောက်ယှက်မှုကြောင့်၎င်း”။
၂၀၁၅ခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ သော်လည်းယခုအချိန်ထိဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲ၊ စုပေါင်းတရားထိုင်ခြင်း၊ တန်ခူးလ(၁၀)ရက်တရားစခန်းပွဲများပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုသာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသေးသည်။
(3)မည်သို့သောအခက်အခဲများကိုကြုံတွေ့ရသည်ဖြစ်စေ၊ အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့အနေဖြင့်ဝိပသနာဘာဝနာပြန့်ပွားရေး၊သာသနာတော် အကျိုးအတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်များအားတစ်စိုက်မတ်မတ်ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်သာဖြစ်ပါသည်။
(4)သို့ဖြစ်ပါ၍တရားရိပ်သာအားယောဂီ(၂၀၀)ဝန်းကျင်ခန့်သီတင်းသုံး၍ ဝိပသနာတရားကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်သည့် အမြဲတန်းထာဝရတရားရိပ်သာကြီးအဖြစ် အမြန်ဆုံးစတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက်ထပ်မံတည်ဆောက်ရန်နှင့် လက်စသတ်ပြီးစီးရန်ကျန်ရှိနေသေးသော အောက်ပါသာသနိကအဆောက်အဦးများအတွက်၊ တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ စုပေါင်း၍ဖြစ်စေ၊ မိမိတို့စွမ်းဆောင်နိုင်သမျှပါဝင်လှူဒါန်းကြ၍ ဓမ္မဒါနပါရမီကုသိုလ်ထူးကြီးကိုလက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ဆွတ်ခူးရယူနိုင်ကြပါစေကြောင်း၊ နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်၍တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
(၂)ရဟန်း၊ သာမနေ၊ ယောဂီဆောင်။ (၁)ဆောင်
ဦးခင်မောင်လတ် (ဥက္ကဌ )၊ သာသနနုဂ္ဂဟအဖွဲ့၊
ဖုန်း. 09 774623714
Facebook username ” Khin Maung Latt”
မှတ်ချက်။ ။ Facebook username ” Khin Maung Latt” ဦးခင်မောင်လတ် (ဥက္ကဌ )၊ သာသနနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ မှ ApannPyay ထံတွင် အကူအညီတောင်ခံ ပေးပို့သည့် အတိုင်း ပြင်ဆင်ခြင်း မရှိ ကူးယူတင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(၁)မန္တွလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ကျားနေအိုင့်ကျေးရွာနေကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးတစ်စုသည်၊ နယ်သူနယ်သား ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအများတရားဘာဝနာများကို အဆင်ပြေအေးချမ်းစွာကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြစေရေး”ဖားအောက်တောရဝိပသနာတရားရိပ်သာခွဲတစ်ခု”တည်ထောင်ရန်အတွက်မိမိတို့ပိုင်မြေယာများအား ဖားအောက်တောရရိပ်သာများ၏ပဓာနနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဌာနာစရိယ၊ ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တအာစိဏဏ္ဍသို့ ၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလကပင်လှူဒါန်းထားခဲ့ပါသည်။
(၂)ထိုမြေများပေါ်တွင်တရားရိပ်သာကျောင်းတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုပါရန်ကျေးရွာနှင့်နယ်မြေသံဃာဂိုဏ်းမှသံဃာများအား ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာလူငယ်အဖွဲ့၊ မြေနှင့်သာသနိကအဆောက်အဦးအလှူရှင်များကိုယ်စားပြုပုဂ္ဂိုလ်များမှ အကြိမ်များစွာတောင်းပန်တိုးလျိုးလျှောက်ထားလာခဲ့ကြသည်မှာ(၅) နှစ်တာကာလကျော်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်းနယ်မြေနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုသံဃာများမှခွင့်ပြုချက်မပေးသေးပါ။ ၂၀၁၇ခုဇွန်လနှင့်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာပင်(၁၅ ကြိမ်တိုင်သွားရောက်လျောက်ထားတောင်းပန်ခဲ့သော်လဲခွင့်ပြုချက်မပေးသးပါ။
(၃)၂၀၁၇ခုဇူလိုင်လ(၂ ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးအကြိမ်ကျေးရွာကိုယ်စားပြုအဖွဲ့မှသွားရောက်လျောက်ထားတောင်းပန်ခဲ့ကြရာ၌ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဦးအာလောကနှင့်ရှားတောကျောင်းဆရာတော်ဦးစက္ကိန္ဒတို့မှအောက်ပါအတိုင်းပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။
**တရားရိပ်သာတွင်၊ ရဟန်း၊ သာမနေ၊ သီလရှင်များအမြဲနေထိုင်သီတင်းသုံးခွင့်မပြု။
( ဦးခင်မောင်လတ် )
အကြောင်းအရာ။ ။ ဝိပသနာတရားရိပ်သာတည်ထောင်ခြင်းအားခွင့်မပြုသည့်ကိစ္စ။
(၁) ကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးတစ်စုသည် နယ်သူနယ်သားရဟန်းရှင်လူပြည်သူအများ ဝိပသနာတရားများကိုအေးချမ်းစွာအားထုတ်နိုင်ရးအတွက် “ကျေးရွာတွင်ဖားအောက်တောရဝိပသနာကမ္မဌာန်းရိပ်သာခွဲ “တစ်ခုတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက်မိမိတို့ပိုင်မြေယာများကို ဖားအောက်တောရရိပ်သာများ၏ ပဓာနနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီး အဂ္ဂမဟာကမ္မဌာနာစရိယ ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တအာစိဏ္ဏအား၂၀၁၃ခုဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကပင်လှူဒါန်းထားခဲ့ပါသည်။
(၂)ထိုမြေပေါ်တွင် ဝိပသနာတရားရိပ်သာတည်ထောင်ခွင့်ပြုပါရန်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ မြေနှင့်သာသနိက အဆောက်အဦးအလှူရှင်များကိုယ်စားပြုအဖွဲ့တို့မှကိုယ်စားပြုပုဂ္ဂိုလ်များမှကျေးရွာအုပ်စုသံဃာများနှင့်နယ်မြေခံသံဃာဂိုဏ်းအား အကြိမ်များစွာလျှောက်ထားတောင်းပန်လာခဲ့သော်လဲ(၅)နှစ်ကျော်ကြာကာလတိုင်ပြီဖြစ်သော်လဲခွင့်ပြုချက်မပေးသေးပါခင်ဗျား။ယခုနှစ်ဇွန်၊ဇူလိုင်လအတွင်းမှာပင်(၁၅)ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်သော်လဲယနေ့အထိခွင့်ပြုချက်မပေးပါခင်ဗျား။
၀၂ – ၀၇ – ၂၀၁၇နေ့ကလဲကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ မြေနှင့်သာသနိကအဆောက်အဦး အလှူရှင်များကိုယ်စားပြုအဖွဲ့တို့မှ သွားရောက်လျှောက်ထားတောင်းပန်ခဲ့ရာကျားနေအိုင့်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဦးအာလောက၊ နှင့်ရှားတောကျောင်းဆရာတော်ဦးစက္ကိန္ဒတို့မှအောက်ပါအတိုင်းပြန်ကြားခဲ့ပါသည် ခင်ဗျား။
**တရားရိပ်သာတွင် ရဟန်း၊ သာမနေ၊ သီလရှင်များအမြဲနေထိုင်သီတင်းသုံးခွင့်မပြု။
**တရားရိပ်သာအမြဲတန်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုရေးအတွက်ဘယ်ဆရာတော်ကြီး၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကြီး၊ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြောဆိုသည်ဖြစ်စေ၊ သူတို့သံဃာအဖွဲ့အစည်း၏သဘောထားရပ်တည်ချက်မပြောင်းလဲနိုင်ပါ။–ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျား။
သို့ / ဥက်ကဌဆရာတျော ဘုရားကွီး နိုငျငံတျောဗဟိုသံဃမဟာနာယကအဖှဲ့၊ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ သာသနာရေးဝနျကွီးခငျဗြား။
(၁)မန္တွလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ ကြောကျပနျးတောငျးမွို့နယျ၊ ကြားနအေိုငျ့ကြေးရှာနကြှေနျတျောတို့ဆှမြေိုးတဈစုသညျ၊ နယျသူနယျသား ရဟနျးရှငျလူပွညျသူအမြားတရားဘာဝနာမြားကို အဆငျပွအေေးခမျြးစှာကငျြ့ကွံပှားမြားအားထုတျနိုငျကွစရေေး”ဖားအောကျတောရဝိပသနာတရားရိပျသာခှဲတဈခု”တညျထောငျရနျအတှကျမိမိတို့ပိုငျမွယောမြားအား ဖားအောကျတောရရိပျသာမြား၏ပဓာနနာယကဆရာတျောဘုရားကွီး၊ အဂ်ဂမဟာကမ်မဌာနာစရိယ၊ ဒေါကျတာဘဒ်ဒန်တအာစိဏဏ်ဍသို့ ၂၀၁၃ခုဖဖေျောဝါရီလကပငျလှူဒါနျးထားခဲ့ပါသညျ။
(၂)ထိုမွမြေားပျေါတှငျတရားရိပျသာကြောငျးတညျထောငျဖှငျ့လှဈခှငျ့ပွုပါရနျကြေးရှာနှငျ့နယျမွသေံဃာဂိုဏျးမှသံဃာမြားအား ကြေးရှာအုပျခြုပျရေး၊ ရပျမိရပျဖ၊ ကြေးရှာလူငယျအဖှဲ့၊ မွနှေငျ့သာသနိကအဆောကျအဦးအလှူရှငျမြားကိုယျစားပွုပုဂ်ဂိုလျမြားမှ အကွိမျမြားစှာတောငျးပနျတိုးလြိုးလြှောကျထားလာခဲ့ကွသညျမှာ(၅) နှဈတာကာလကြျောလှနျခဲ့ပွီဖွဈသျောလညျးနယျမွနှေငျ့ကြေးရှာအုပျစုသံဃာမြားမှခှငျ့ပွုခကျြမပေးသေးပါ။ ၂၀၁၇ခုဇှနျလနှငျ့ဇူလိုငျလအတှငျးမှာပငျ(၁၅ ကွိမျတိုငျသှားရောကျလြောကျထားတောငျးပနျခဲ့သျောလဲခှငျ့ပွုခကျြမပေးသးပါ။
(၃)၂၀၁၇ခုဇူလိုငျလ(၂ ရကျနကေ့နောကျဆုံးအကွိမျကြေးရှာကိုယျစားပွုအဖှဲ့မှသှားရောကျလြောကျထားတောငျးပနျခဲ့ကွရာ၌ ရှာဦးကြောငျးဆရာတျောဦးအာလောကနှငျ့ရှားတောကြောငျးဆရာတျောဦးစက်ကိန်ဒတို့မှအောကျပါအတိုငျးပွနျကွားခဲ့ပါသညျ။
**တရားရိပျသာတှငျ၊ ရဟနျး၊ သာမနေ၊ သီလရှငျမြားအမွဲနထေိုငျသီတငျးသုံးခှငျ့မပွု။
( ဦးခငျမောငျလတျ )
အကွောငျးအရာ။ ။ ဝိပသနာတရားရိပျသာတညျထောငျခွငျးအားခှငျ့မပွုသညျ့ကိစ်စ။
(၁) ကြှနျတျောတို့ဆှမြေိုးတဈစုသညျ နယျသူနယျသားရဟနျးရှငျလူပွညျသူအမြား ဝိပသနာတရားမြားကိုအေးခမျြးစှာအားထုတျနိုငျရးအတှကျ “ကြေးရှာတှငျဖားအောကျတောရဝိပသနာကမ်မဌာနျးရိပျသာခှဲ “တဈခုတညျထောငျဖှငျ့လှဈနိုငျရနျအတှကျမိမိတို့ပိုငျမွယောမြားကို ဖားအောကျတောရရိပျသာမြား၏ ပဓာနနာယကဆရာတျောဘုရားကွီး အဂ်ဂမဟာကမ်မဌာနာစရိယ ဒေါကျတာဘဒ်ဒန်တအာစိဏ်ဏအား၂၀၁၃ခုဖဖေျောဝါရီလကတညျးကပငျလှူဒါနျးထားခဲ့ပါသညျ။
(၂)ထိုမွပေျေါတှငျ ဝိပသနာတရားရိပျသာတညျထောငျခှငျ့ပွုပါရနျကြေးရှာအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့၊ ရပျမိရပျဖ၊ လူငယျအဖှဲ့၊ မွနှေငျ့သာသနိက အဆောကျအဦးအလှူရှငျမြားကိုယျစားပွုအဖှဲ့တို့မှကိုယျစားပွုပုဂ်ဂိုလျမြားမှကြေးရှာအုပျစုသံဃာမြားနှငျ့နယျမွခေံသံဃာဂိုဏျးအား အကွိမျမြားစှာလြှောကျထားတောငျးပနျလာခဲ့သျောလဲ(၅)နှဈကြျောကွာကာလတိုငျပွီဖွဈသျောလဲခှငျ့ပွုခကျြမပေးသေးပါခငျဗြား။ယခုနှဈဇှနျ၊ဇူလိုငျလအတှငျးမှာပငျ(၁၅)ကွိမျရှိပွီဖွဈသျောလဲယနအေ့ထိခှငျ့ပွုခကျြမပေးပါခငျဗြား။
၀၂ – ၀၇ – ၂၀၁၇နကေ့လဲကြေးရှာအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့၊ ရပျမိရပျဖ၊ လူငယျအဖှဲ့၊ မွနှေငျ့သာသနိကအဆောကျအဦး အလှူရှငျမြားကိုယျစားပွုအဖှဲ့တို့မှ သှားရောကျလြှောကျထားတောငျးပနျခဲ့ရာကြားနအေိုငျ့ရှာဦးကြောငျးဆရာတျောဦးအာလောက၊ နှငျ့ရှားတောကြောငျးဆရာတျောဦးစက်ကိန်ဒတို့မှအောကျပါအတိုငျးပွနျကွားခဲ့ပါသညျ ခငျဗြား။
**တရားရိပျသာတှငျ ရဟနျး၊ သာမနေ၊ သီလရှငျမြားအမွဲနထေိုငျသီတငျးသုံးခှငျ့မပွု။
**တရားရိပျသာအမွဲတနျးဖှငျ့လှဈခှငျ့ပွုရေးအတှကျဘယျဆရာတျောကွီး၊ ဘယျအဖှဲ့အစညျးကွီး၊ ဘယျပုဂ်ဂိုလျကွီးတှကေိုယျတိုငျလာရောကျပွောဆိုသညျဖွဈစေ၊ သူတို့သံဃာအဖှဲ့အစညျး၏သဘောထားရပျတညျခကျြမပွောငျးလဲနိုငျပါ။–ဟူ၍ဖွဈပါသညျခငျဗြား။
(၂)ထို့ကွောငျ့ နယျသူနယျသားရဟနျးရှငျလူပွညျသူအမြားတို့ ဝိပသနာတရားမြားကိုအဆငျပွလှေယျကူစှာ အားထုတျနိုငျကွရေးအတှကျ “ဖားအောကျတောရဝိပသနာကမ်မဌာနျးရိပျသာခှဲတဈခု”တညျထောငျနိုငျရနျအလို့ငှာ၊၆ မိမိတို့ပိုငျမွယောမြားအား ဖားအောကျတောရတရားရိပျသာမြား၏ ပဓာနနာယကဆရာတျောဘုရားကွီး “အဂ်ဂမဟာကမ်မဌာနာစရိယ၊ဒေါကျတာ၊ ဘဒ်ဒန်တအာစိဏ်ဏထံသို့” ၂၀၁၃ခုဖဖေျောဝါရီလကပငျ၊ နယျမွခေံသံဃာမြား၊ကြေးရှာအုပျစုသံဃာမြားနှငျ့အမြားပွညျသူတို့၏ ရှမှေ့ောကျတှငျလှူဒါနျးခဲ့ပါသညျ။
(၃)ထိုမွပေျေါတှငျ”ဝိပသနာကမ်မဌာနျးရိပျသာတဈခုတညျထောငျခှငျ့ပွုတျောမူပါရနျ “ကြေးရှာအုပျခြုပျရေး၊ ရပျမိရပျဖ၊ လူငယျအဖှဲ့၊ မွနှေငျ့သာသနိကအဆောကျအဦးအလှူရှငျကိုယျစားပွုသူမြား”တို့မှ နယျမွခေံသံဃာမြားနှငျ့ကြေးရှာသံဃာမြားသို့ ၂၀၁၂ခုနှောငျးပိုငျးမှ သညျယခု အခြိနျအထိ အကွိမျမြားစှာလြောကျထားတောငျးပနျလာခဲ့ကွသညျမှာ (၅)နှဈကြျောကွာခဲ့ပွီဖွဈသျောလဲ၊မညျသညျ့အကွောငျးပွခကျြမှမရှိဘဲခှငျ့ပွုခကျြပေးရနျငွငျးဆနျနကွေပါသညျအရှငျဘုရား။
(၄)၂၀၁၇ခုဇှနျလနှငျ့ဇူလိုငျလအတှငျးမှာပငျကြားနအေိုငျ့ရှာဦးကြောငျးဆရာတျောဦးအာလောကနှငျ့ကြားနအေိုငျ့ရှာရှားတောကြောငျးဆရာတျောဦးစက်ကိန်ဒတို့ထံသို့(၁၅)ကွိမျတိတိသှားရောကျလြောကျထားတောငျးပနျခဲ့ကွရာ၌ ၀၂ – ၀၇ – ၂၀၁၇နတှေ့ငျထိုဆရာတျော(၂)ပါးမှအောကျပါအတိုငျးပွနျကွားခဲ့ပါသညျအရှငျသူမွတျဘုရား။
**တရားရိပျသာတှငျ ရဟနျး၊ သာမနေ၊ သီလရှငျမြားအမွဲနထေိုငျသီတငျးသုံးခှငျ့မပွုနိုငျ။
**တရားရိပျသာဖှငျ့လှဈခှငျ့ပွုရေး၊ ဘယျဆရာတျောကွီး၊ ဘယျအဖှဲ့အစညျးကွီး၊ ဘယျပုဂ်ဂိုလျကွီးတှလော၍ပွောသညျဖွဈစသေူတို့၏သဘောထားရပျတညျခကျြမပွောငျးနိုငျ-ဟူ၍ဖွဈပါသညျအရှငျဘုရား။
—ဆှမျးခံရှာဒကာ ဒကာမတို့၏အပျေါ၌ရဟနျးဝတ်တရားလဲမကွပှေနျသညျ့ ထိုရဟနျးမြားအားတာဝနျရှိသံဃာနှငျ့အစိုးရအဖှဲ့ အစညျးမြားကိုယျတိုငျကြေးရှာသို့ကှငျးဆငျးစဈဆေး၍သာသနာတျောသနျ့ရှငျးရေးဆောငျရှကျပေးပါရနျ ဘုရားတပညျ့တျောခွတေျောအစုံဦးတိုကျ၍ ရိုသလေေးမွနျစှာ လြှောကျထားတောငျးပနျအပျပါသညျဆရာတျောအရှငျသူမွတျကွီးဘုရာယ။
(ဗုဒ်ဓမွတျစှာ၊ သာသနာ၊ ရောငျဝါနသေို့လငျးစသေောဝျ)
(1)ဤနယျမွတှေငျစဈမှနျသော”သိက်ခာ(၃)ပါး၊ဝိပသနာတရား” ထှနျးကားပွနျ့ပှားလာမညျကိုမလိုလားကွသော “သာသနာတျောကိုမှီခိုစားသောကျနကွေသညျ့နယျမွခေံ- လုပျဆောငျပိုငျခှငျ့ရှိသညျ့ပုဂ်ဂိုလျအခြို့”၏ပိတျပငျတားဆီးနှောကျယှကျမှုကွောငျ့၎ငျး”။
၂၀၁၅ခုနှဈဆနျးပိုငျးမှစတငျတညျဆောကျခဲ့ သျောလညျးယခုအခြိနျထိဖှငျ့လှဈနိုငျခွငျးမရှိသေးဘဲ၊ စုပေါငျးတရားထိုငျခွငျး၊ တနျခူးလ(၁၀)ရကျတရားစခနျးပှဲမြားပွုလုပျခွငျးတို့ကိုသာ ဆောငျရှကျနိုငျပါသေးသညျ။
(3)မညျသို့သောအခကျအခဲမြားကိုကွုံတှရေ့သညျဖွဈစေ၊ အကြိုးတျောဆောငျအဖှဲ့အနဖွေငျ့ဝိပသနာဘာဝနာပွနျ့ပှားရေး၊သာသနာတျော အကြိုးအတှကျလုပျဆောငျသငျ့သညျမြားအားတဈစိုကျမတျမတျဆကျလကျ လုပျဆောငျသှားမညျသာဖွဈပါသညျ။
(4)သို့ဖွဈပါ၍တရားရိပျသာအားယောဂီ(၂၀၀)ဝနျးကငျြခနျ့သီတငျးသုံး၍ ဝိပသနာတရားကငျြ့ကွံပှားမြားအားထုတျနိုငျသညျ့ အမွဲတနျးထာဝရတရားရိပျသာကွီးအဖွဈ အမွနျဆုံးစတငျဖှငျ့လှဈနိုငျရနျအတှကျထပျမံတညျဆောကျရနျနှငျ့ လကျစသတျပွီးစီးရနျကနျြရှိနသေေးသော အောကျပါသာသနိကအဆောကျအဦးမြားအတှကျ၊ တဈဦးခငျြးဖွဈစေ၊ စုပေါငျး၍ဖွဈစေ၊ မိမိတို့စှမျးဆောငျနိုငျသမြှပါဝငျလှူဒါနျးကွ၍ ဓမ်မဒါနပါရမီကုသိုလျထူးကွီးကိုလကျဝယျပိုငျပိုငျဆှတျခူးရယူနိုငျကွပါစကွေောငျး၊ နိဗ်ဗာနျအကြိုးမြှျော၍တိုကျတှနျးနှိုးဆျောအပျပါသညျခငျဗြား။
(၂)ရဟနျး၊ သာမနေ၊ ယောဂီဆောငျ။ (၁)ဆောငျ
ဦးခငျမောငျလတျ (ဥက်ကဌ )၊ သာသနနုဂ်ဂဟအဖှဲ့၊
ဖုနျး. 09 774623714
မှတျခကျြ။ ။ Facebook username ” Khin Maung Latt” ဦးခငျမောငျလတျ (ဥက်ကဌ )၊ သာသနနုဂ်ဂဟအဖှဲ့ မှ ApannPyay ထံတှငျ အကူအညီတောငျခံ ပေးပို့သညျ့ အတိုငျး ပွငျဆငျခွငျး မရှိ ကူးယူတငျပွလိုကျခွငျးဖွဈပါသညျ။
Previous Previous post: ကိုယ်ဝန်ရှိနေပီ မောင်
Next Next post: လက်ရဲဇက်ရဲနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲရဲ့ သမိုင်းဝင်ဇာတ်သိမ်းခန်း
ရေထည့်လိုက်ရုံနဲ့ ၀ိုင် အရက်အဖြစ် ပြောင်းပေးမယ့် ဖန်ခွက်
တပ်​မ​တော်​ကို အဆင့်​မြင့်​လက်​နက်​များ တပ်​ဆင်​ရန်တရုတ်​ သမ္မတ တိုက်​တွန်း….​
ငါးမန်းကို လက်သီးနဲ့ထိုးပြီး လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်
​နေ့လည်​ ရုံးမှ အိမ်သို့​ထမင်းစားပြန်​​တော့ ရပ်​ကွက်​ထဲက ​
ရခိုင်ပြည်နယ်က မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ယနေ့ထိ စွန့်ခွာသွားသူတွေ ရှိနေ
မိတ္ထီလာမှာ ရှေးဟောင်းဘုရား ထီးတင်ခဲ့တဲ့ ဇော်ဝင်းထွဋ်နဲ့ အာဇာနည်တို့မိသားစုများ
ဓာတု ​ဆေးကင်းတဲ့ သဘာဝပုဇွန်ချဉ် လုပ်နည်း
အဆင့်မြင့် Precious ဆန်မျိုးစုံ
Categories Select Category breaking (20) Buddha (21) Car (1) Medel (1) နည်းပညာ (16) မှုခင်း (27) သတင်း (122) သတင်းဆောင်းပါ (39) သတင်းဆောင်းပါး (14) သမိုင်း (11) သုတရသ (229) အစားအသောက် (5) အလှအပ (14) အားကစားသတင်း (9) အနုပညာ (41) ဆေးပညာ (46) ဆောင်းပါး (35) ​ဗေဒင်​ (9) ပြည်တွင်းသတင်း (68) နိုင်​ငံတကာ သတင်း (75)
Make your life precious
Copyright @ Moethauk Media
Powered by Moethauk Media Team